Ukhuselo lweNtshabalalo eNtsha yaseJamani - i-NJ & NY yearhente yeZindlu, uMenzelwa, uKhuselo lweNqanawa kunye namaGqwetha abaGqithisi
Ukhuselo lweNtshabalalo eNtsha laseNew York
ikhaya / Blog / Ukhuselo lweNtshabalalo eNtsha laseNew York
Aprili 1, 2020 Ukhuselo lweNtshabalalo eNtsha laseNew YorkUshiye uluvoAndres Cardenas
Kwezi veki zimbalwa zidlulileyo, sibone iinguqu ezininzi kwindlela ezisebenza ngayo iinkqubo zenkundla kwilizwe lonke. Oku kuya kuphakamisa inkxalabo kwabo banemicimbi ...
Ukufuduka kwase-US: Iimbacu kunye neAsylum
Matshi 30, 2020 Ukhuselo lweNtshabalalo eNtsha laseNew YorkUshiye uluvoAndres Cardenas
Ubume bembacu okanye indawo yokhuseleko inokunikwa abantu abaye batshutshiswa okanye boyika ukuba baya kutshutshiswa ngenxa yohlanga, inkolo, ubuzwe kunye / okanye ubulungu ...
I-US- Ukufudukela kwelinye ilizwe - iFiancé Visa vs iSpousal Visa
I-Spousal Visa okanye ikhadi eliluhlaza elisekwe emtshatweni (CR-1) liyafumaneka kumaqabane abemmi baseMelika. Amaqela kufuneka ...
January 27, 2020 Ukhuselo lweNtshabalalo eNtsha laseNew York, Law Estate RealUshiye uluvoAndres Cardenas
Amalungelo abaqeshi kumgaqo-nkqubo weND wokuxelwa kwangaphambili kunye nasemva kokuthengisa
Kwi-Ofisi yomthetho kaPatel, uSoltis kunye noCardenas simela omnini ndawo kunye nabaqeshi. Siyawaqonda amalungelo omqeshisi kunye nabaqeshi ngexesha lokuvezwa ...
January 17, 2020 Ukhuselo lweNtshabalalo eNtsha laseNew YorkUshiye uluvoAndres Cardenas
Yintoni enokwenziwa kukungasebenzi kakuhle kweSahluko 13?
Isahluko se-13 sokungabinamali sithathwa njengento ebhatalwa ngumvuzo obhatala umrholo ukuze umntu onetyala akwazi ukwenza isicwangciso sokuhlawula ityala lakhe elithatha iminyaka emithathu ukuya kwemihlanu. Ngelixa ...
January 3, 2020 Ukhuselo lweNtshabalalo eNtsha laseNew YorkUshiye uluvoAndres Cardenas
Igama lam ndinguVeer Patel. Ndili gqwetha kunye neqabane kuPatel, Soltis, kunye negqwetha likaCardenas kwezomthetho kwiPhondo laseNew Jersey. Ndiyaziqhelanisa ...
January 2, 2020 Ukhuselo lweNtshabalalo eNtsha laseNew YorkUshiye uluvoAndres Cardenas
Le nkampani iqine umthetho wokukhusela ukubonwa kwangaphambili eNew York naseNew York. Umbuzo wanamhlanje uthi: "Ngaba kufanelekile ukuba ndiphendule impendulo nangona ...
Kwenzeka ntoni xa ndingafaki mpendulo kwityala lokuchazwa kwendlela yam ye-NJ?
Disemba 31, 2019 Ukhuselo lweNtshabalalo eNtsha laseNew YorkUshiye uluvoAndres Cardenas
Oku kuqina kukuziqhelanisa nokuzikhusela. Sifuna ukuphendula umbuzo umbuzo oqhelekileyo esiwufumana malunga nokuziveza kusengaphambili, "Ndingathini xa ndingafaki mpendulo ...
Disemba 31, 2019 New Bankruptcy, Ukugxothwa eNtsha kweJersey, Ukhuselo lweNtshabalalo eNtsha laseNew York, Intengiso yeSheriffUshiye uluvoAndres Cardenas
Ndingahlala endlwini yam emva kwentengiso yesherifu ye-NJ?
Sibuzwa esi sicelo silandelayo sifunwa ngabaninimzi abaninzi baseNew Jersey abajongane nokugxothwa: "Ndingabahlala endlini yam emva kokubhengezwa?" Impendulo elula yile, "Ewe usenokuba ...
Disemba 30, 2019 Ukhuselo lweNtshabalalo eNtsha laseNew York, Law Estate Real, Intengiso yeSheriffUshiye uluvoAndres Cardenas
Ifemu yethu yomthetho imele abathengisi abaninzi kwinkqubo yokuxelwa kwangaphambili. Ngamaxesha athile nathi sisebenzela ukuthengisa iipropathi ngelixa abathengi bethu bebhanga. Eyona njongo kukusindisa ikhaya, okanye ...
Disemba 30, 2019 Ukuchithwa, New Bankruptcy, Ukhuselo lweNtshabalalo eNtsha laseNew YorkUshiye uluvoAndres Cardenas
Ungagcina ikhaya lakho emva kokubhengezwa kwerhafu ye-NJ usebenzisa u ...
Disemba 2, 2019 Ukhuselo lweNtshabalalo eNtsha laseNew YorkUshiye uluvoAndres Cardenas
EIndiya, intengiso yearhente yokuthenga izindlu ihlala ijongwa ngamehlo okrokrelayo. Kwaye kutheni kungenjalo, sihlala sifumana iindaba ezininzi zokukhankanya ...
Oktobha 15, 2019 Ukhuselo lweNtshabalalo eNtsha laseNew YorkUshiye uluvoUDerek Soltis
Ukuba uye wachaphazeleka nguSteven Salami, sifumene lo myalelo ungezantsi usuka kwi-ofisi yaseMonmouth ...
Oktobha 14, 2019 Ukhuselo lweNtshabalalo eNtsha laseNew YorkUshiye uluvoUDerek Soltis
Umbuzo oqhelekileyo esi ubuzwa rhoqo sisoloko sibuzwa, "Nokuba ngaba umntu okwinkqubo yokugcwalisa ngokuchithwa kwemali uza kubanakho ukugcina ikhaya labo." Khawuleza ...
Oktobha 4, 2019 Ukhuselo lweNtshabalalo eNtsha laseNew YorkUshiye uluvoUDerek Soltis
Uyiqasha njani igqwetha lamaIndiya eMelika.
Heee, igama lam ndinguVerer Patel. Ndili gqwetha eJersey City.
Ndineofisi yomthetho eneeofisi eHackensack, eJersey City, eFreehold, eNew Jersey naseNew York, ...
Njani ukuvezwa kwekhaya le-NJ / iNew Bankruptcy ichaphazela njani inqanaba lakho letyala?
Septemba 10, 2019 Ukuchithwa, Ukhuselo lweNtshabalalo eNtsha laseNew YorkUshiye uluvoUDerek Soltis
Ukuchazwa kweNtshukumo eNtsha yaseJamani kuneempembelelo zakho zeSchool Card
Abantu abaninzi babuza ukuba ukubhenca kuchaphazela njani amanqaku akhe. Bakwabuza ukuba ukungabinamali kuchaphazela njani amanqaku okuthenga ngetyala? Zombini iimeko zineempembelelo ezahlukeneyo ...
Ukuthengisa kufutshane vs ukuFutshane koLutsha vs ukubonakaliswa, kunye nolunye ukhetho onokuthi ukwazi ngalo
Septemba 9, 2019 New Bankruptcy, Ukhuselo lweNtshabalalo eNtsha laseNew YorkUshiye uluvoAndres Cardenas
Ukuthengisa kufutshane vs ukuhlawula kufutshane vs ukubonakaliswa vs ukubhengezwa vs nezinye izinto omele uziqwalasele.
Ukuba ufunda eli nqaku ngokungangqinelani kukuba ujongene nokuvezwa okanye mhlawumbi ujongene nalo ngokufutshane. Ngokomyinge we-1% wawo onke amakhaya eNew ...
Agasti 5, 2019 Ukhuselo lweNtshabalalo eNtsha laseNew YorkUshiye uluvoLazaro Cardenas
Ngaba uyafuna ukwazi, "Yintoni omele uyenze emva kokubhengezwa kwerhafu eNew York?"
Thetha nommeli woKhuselo lweNtsholongwane yaseNew Jersey emva koKuthengiswa kweRhafu eNtsha eNew Jersey.
Nokuba isigwebo sokugqibela sehle ngokuchasene nawe ...
Inkcazelo: Inqaku ngentsingiselo yesongezelelo sezilwanyana kunye nezibonelelo zokuba ikopi enye inamathele kwisivumelwano sokuqeshisa. Ikwadwelise amagama asezantsi akhankanywe ...
Inkqubo yoKhuselo lweNdlu yasimahla ekuQondweni kweza e-New Jersey
Ngamana 2, 2019 Ukuchithwa, New Bankruptcy, Ukhuselo lweNtshabalalo eNtsha laseNew York1 CommentI-Veer Patel
Ukhuseleko lwendlu yasimahla luyeza eNew Jersey
I-New Jersey Bill A5001 ijongana ngokuthe ngqo nommiselo wokukhawulelwa kwaye wapasiswa ngo-Epreli 29, 2019. Inkqubo "iza kuqala ukusebenza kwaye ifanele ukusebenza kwizindlu ekubanjiswe kuzo ...